မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ | ShweProperty.com
ငှားရန် - အမှတ်၈/၁၀၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း/ လသာမြို့နယ်မှာ တည်ရှိတဲ့…
လသာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပရိဘောဂအပြည့်အစုံပါရှိတဲ့ ဒီ Penthouse က ၂၄၀၀ စတုရန်းပေ အကျယ်အဝန်းရှိ်ပါတယ်။ Master Bedroom နှစ်ခန်း၊ သီးသန့်ရေချိုးခန်း၊ဘိုထိုင်အိမ်သာတို့…...
ပရိဘောဂအပြည့်အစုံပါရှိတဲ့ ဒီ Penthouse က ၂၄၀၀ စတုရန်းပေ အကျယ်အဝန်းရှိ်ပါတယ်။ Master Bedroom နှစ်ခန်း၊ သီးသန့်ရေချိုးခန်း၊ဘိုထိုင်အိမ်သာတို့…
Yadanar Shwe Htun
Advertiser : Yadanar Shwe Htun
Phone no : 01-200085, 01-385710, 09-5021437, 09-788200085,
ငှားရန် -2Bedrooms,Good Natural Light,Nice Kitchen,Fully Furnished apartment for Rent in Yaw Min Gyi Area
2 Bedrooms ( 1 Master Bedroom and 1 Single Room) with Lots of Natural Light as we can see in the pictures below) Fully Furnished Car Park,Lift and Generator Included. 1500 USD/month ဗိုလ်ချူပ်ဈေးနှင့် Junction city အနီး နိုင်ငံခြားသား…...
2 Bedrooms ( 1 Master Bedroom and 1 Single Room) with Lots of Natural Light as we can see in the pictures below) Fully Furnished Car Park,Lift and Generator Included. 1500 USD/month ဗိုလ်ချူပ်ဈေးနှင့် Junction city အနီး နိုင်ငံခြားသား…
Yaw Min Gyi St